Ithegi: imibuzo ebhloga
NgoLwesithathu, Julayi 18, 2007 NgoLwesibini, Meyi 3, 2016 Douglas Karr
Ukuba kukho into enye ekutsala ubuyele kwinyani, iyadibana namashishini engingqi ukuxoxa ngokubhloga kunye nemidiya yoluntu. Amathuba kukuba, ukuba ufunda le nto, uyakuqonda ukubhloga, imithombo yeendaba ezentlalo, ukubhukmakha kwezentlalo, ukukhangela kweinjini yokukhangela, njl. Ngaphandle kwe 'blogoshere', indibaniselwano yaseMelika isalwa ngokufumana igama lesizinda kunye nokubeka iphepha lewebhu. Ngokwenene zinjalo! Uninzi lusajonge kwii-Classifieds, kwiPhepha eliMthubi kunye neMeyile ngqo